Wiricheya Chinyorwa - Kugara Kuongorora
Chii chinonzi a hwiricheya Chiremba?
A hwiricheya chigaro chinofamba chine mavhiri icho munhu anokwanisa kudzora nemaoko kana zvemagetsi. Chirevo hwiricheya musanganiswa wakasindimara wetsigiro yemashure pamwe nesisitimu inofamba yakabatana kugadzira nzvimbo ine simba yekugara.
Postural rutsigiro system inoumbwa nezvikamu zvinoita kusangana nemushandisi chimiro chemuviri zvakananga. Semuenzaniso chigaro checheya, kumashure uye tsoka kutsigira pamwe nezvimwe zvikamu zvekuwedzera zvinodikanwa kutsigira postural positioning.
Mobility Base inosanganisira tubular chimiro, armrests, tsoka rutsigiro, mavhiri uye matairi.
Kusarudza yakakodzera hwiricheya Kugara kwenzvimbo kunosanganisira kuti data riunganidzwe zvine chekuita nekukanganisa, kuongororwa, kugona kwemuviri uye kurambidzwa, kutora chikamu pabasa kana zvine chekuita nebasa, kurongeka kwemuviri uye munharaunda uye nzira yekutakura.
A hwiricheya mushonga unopihwa kune avo vanoda rubatsiro kufamba, nekuti nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe chikonzero ivo havagone kufamba vakasununguka.
Chiremba anozofanirwa kuongorora kugona kwemurwere kufamba uye kutenderera vasati vapa a hwiricheya chiremba.
Kune akatiwandei marudzi e mavhiripu. Inoshandiswa nemaoko mavhiripu zvinofambiswa kana kudzorwa chete nemaoko emushandisi. Simba mavhiripu inodzorwa nemagetsi.
ani Benefits kubva a hwiricheya Chiremba?
Vanotambura nehurema hwepfupi kana hwakareba vanozobatsirwa ne a hwiricheya mushonga. Semuenzaniso, akaremara haana kana manzwiro mumakumbo ezasi uye angangoda a hwiricheya kune yakasara yehupenyu hwake. Mumwe munhu ane mapfupa akavhunika angangoda a hwiricheya mushonga kusvikira kukuvara kwapora.
hwiricheya zvirevo zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu, uye zvinhu zvakawanda zvinotarisirwa. Vanhu vane matambudziko anotevera vanogona kutora mukana we hwiricheya mushonga:
akavhunika mapfupa kana kuipa kumakumbo kana tsoka
kuenzanisa kana gait matambudziko
kutadza kufamba nzendo refu
Zvinhu zvinofanirwa kutariswa kana uchifunga nezve a hwiricheya:
Chii chakareruka cheya chigaro chinokwanisika?
Uchada here bhuku remagetsi kana remagetsi rine chigaro
Iine chimiro chakasimba chekufamba kwakanyanya
Yakagadzirwa-naka, iine marefu-magumo mabheyari ekudzivirira mashoma roll kuramba kana simba rekushandisa rashandiswa, uye akachengeteka asiri mafambisi zvidimbu.
Iine akanakisa mavhiri kukura uye dhizaini yemunhu mutengi mashandiro
Inopa musanganiswa unobudirira kwazvo wehunyore hwekufambisa uye kugadzikana
Mari yakadii inovharwa neinishuwarenzi?
A hwiricheya inofanirwa kunyatsoenderana nemunhu anoishandisa uye nekuisa ese anodikanwa mabasa. Vanachiremba vako uye vamwe vashandi vehutano vachakubatsira iwe kusarudza chaizvo izvo hwiricheya ndiyo inonyanya kukodzera pane zvaunoda.
Vari kuenda kufunga nezve mamiriro ako, kugona kufamba, zera, saizi, simba, hupenyu hwezuva nezuva, pekugara pekugara, mari uye zvaunofarira zvega. Chigaro chichavakwa kune zvaunofarira uye chimiro chemuviri, kusanganisira kukwirisa kwechigaro, rutsigiro rwemakumbo, kumisikidza backrest uye nekugadzwa kwemaoko.